Shiinaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Warshadaha, CE, Soosaarayaasha - Tiknoolajiyadda Daahirinta (Zhejiang) Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >Gawaarida dhalaaliya kululeeyaha marinnada>Codsadaha dhalaalida kululaynta
Qoriga lagu buufiyo Fibre
Qoriga lagu buufiyo fiber-ka waxaa gacanta ku haya gaas wuxuuna ka kooban yahay qaybo badan oo buufis ah oo lagu buufiyo qaybo kala duwan oo leh miirayaal dambiil lagu dhisay. Waxay leedahay hawsha kahortaga wasakhda walxaha wanaagsan ee qoriga buufinta. Miiraha waxaa bixiya qaybta ugu weyn ee dhalaalka kulul (ASU) si loo xasiliyo cadaadiska xabagta. Qoryahayaga lagu buufiyo fiber-ka ayaa sannado badan si fiican loogu iibiyay ASEAN iyo EU, waxaana aad u amaanay macaamiisha.
Qori buufin muquuninta
Qorigeenna buufin ee muquuninta ah ma sahlana in la xiiro, si fudud loo nadiifiyo, foornada looma baahna, oo nadiifi 4-6 toddobaad kasta. Miisaanka buufinku waa yar yahay 2-5gsm. U isticmaal cadaadiska hawada ugu hooseeya 5-6psi Qoryaha buufinta ee wareegga ah waxaa si fiican loogu iibiyay ASEAN iyo EU sanado badan, waxaana aad u amaanay macaamiisha.
TAD ama TPB Slot Codsadayaasha Dhimashada
Codsadeyaasheena Slot Die waxay ansixiyeen shaashad shaashad shaashad gaar ah, oo leh saameyn wanaagsan oo shaandhayn ah, way fududahay in la nadiifiyo oo la beddelo, sanka xoqaduna ma sahlana in la xannibo. Joogtaynta hawlgalku waxay gaari kartaa 2000 jeer daqiiqaddii, iyadoo la siinayo saameyn wax ku ool ah oo xiritaanka ah. Codsadayaasha loo yaqaan 'Slot Die Applicators' ayaa si wanaagsan loogu iibiyay ASEAN iyo EU sanado badan, waxaana aad u amaanay macaamiisha.
TAB Bead Buufinta Codsadayaasha
Codsadeyaasheena TAB Bead Spray spray waxay adeegsadaan mashiin faleebo yar si looga hortago in shilalka iyo silig sawir laga qaado. Qaab dhismeedka kuleylka ee kuleyliyaha ah wuxuu si wax ku ool ah u baabiin karaa wasakhda iyo carbides si looga hortago qafiska sanka. sanado badan, oo ay aad u amaanan macaamiisha.
THG qoriga buufinta Buugga
Qoriga buufinta Buugga ee 'THG' waa mid dabacsan oo ku habboon qiyaasta iyo laminating fudud. Waxay ku siin kartaa nozzles qeexitaanno kala duwan oo ah furitaanka 0.4-1.0MM si loo xalliyo dhibaatada xitaa ku buufinta gacanta. Wadajirka ayaa loo rogi karaa 360 digrii si looga takhaluso qallooca tuubada. Qoryaha buufinta ee wareega ayaa sifiican looga iibiyay ASEAN iyo EU sanado badan, waxaana aad u amaanay macaamiisha.
TGD Gear Madaxa Kaxay
Naqshadeynta qaaska ah ee barta dareeraha dareeraha baddasha waxay xaqiijineysaa xasaasiyadda sare iyo saxnaanta xabagta furaha. Qaab dhismeedka filter-ka ee kuleylka leh ayaa si wax ku ool ah uga takhalusi kara wasakhda iyo carbides si looga hortago xirida sanka.